Izixhobo & QC
izinto yokugoqa yecuba
iphepha straw lokusonga
REVODE105 yenye uhlobo Pla kancincane leyo ilungiselelwe ngokukodwa ngenxa yokusela ngaphaya.
Pla resin REVODE105 iindlela zovavanyo
Zinyibilika flow rate (g / 10min, 190 ℃ / 2.16Kg) 3-8 GB / T3682-2000
lobushushu Ubushushu ubugqwetha (℃) 60
Izinga shrinkage nkosana (zokunyibilikiswa enxuseneyo flow indlela) 0,005 ISO294-4: 2001
Udini shrinkage (zokunyibilikiswa nkqo flow indlela) 0,003 ISO294-4: 2001
uqine (MPA) 45-60 GB / T1040-2006
Zobude ngethuba lokuphumla (%) ≥ 10 GB / T1040-2006
I Pla resin REVODE105 ilungele ukuba processing of imicinga non ubushushu-ukumelana neselubala, ngqo asihambelani ngenxa yokusela egosogoso.
Le resin REVODE105 nga zingenziwa kwi zemveli ezinepolypropylene (PP) iindiza extrusion umatshini xa sisakhula. Xa phambili, nceda uqaphele:
I: Iqondo lobushushu processing (ubushushu ezithile kufuneka ubuhle):
Ukufudumeza icandelo lokuqala (kufutshane feed umqala): 130-150 ℃, amanye amacandelo: 160-180 ℃ Pla intlaka REVODE105 liqalisa ukunyibilika kwiqondo lobushushu ngasentla 60 ℃, kwimeko lobushushu eliphezulu kakhulu emqaleni zokuxheshisela kukhokelela nentlaka agglomeration nokondla unsmooth, kucetyiswa ukuba ugalele amanzi okupholisa ibhatyi ekutyiseni kwicandelo emqaleni.
Ngenxa REVODE105-nkum ngaphezu yemveli PP resin, zombini iziphelo lowanyathela xa ukusika umbhobho. Kuyanconywa ukuba ukulawula ubushushu amanzi kwitanki lamanzi 35 no-40 ℃, ukuqinisekisa umbhobho iye lobushushu eliphezulu xa ukusika, ngaloo ndlela ukuphepha nokuqhekeka lula.
II: Umbala lwe alpha
Ukuba imveliso kufuneka ezinemibala, qiniseka ukuba usebenzisa umbala izicelo zingaphendula ngokucothayo ekhethekileyo okanye Pla-based umbala master kwibhetshi. izicelo zingaphendula ngokucothayo engafanelekanga okanye umbala master ibhetshi kunokukhokelela imveliso ntlanzi, umphezulu imveliso unsmooth kwaye akakwazi extrude.
Ukuba izinto umbala lwe alpha ayikwazi ingasetyenziswa kwisithuba seeyure ezingama-2, kucetyiswa ukuba usebenzise 25 kg / ibhegi intlaka yonke ngexesha elinye, endaweni, sebenzisa isiqingatha uyitywine inxenye isixhobo eshushu uphawu ngexesha elinye. Injongo kukuba ukuveza imathiriyeli emoyeni mfutshane kangangoko kunokwenzeka.
REVODE105 iye ezenzwe yindlela iyoma crystallization, kwaye isiqulatho sokufuma lingaphantsi than400 PPM. Le resin ukuba agcinwe engxoweni ngefoyile ye-aluminiyam, ikhuselwe ibhokisi okanye ibhegi ngaphandle zingasetyenziswa ngqo. Gcina iphakheji atywinwe kude kube ulungele ukusebenzisa yaye ngokukhawuleza kwetha naziphi na izinto engasetyenziswayo, okanye intlaka uya ukufunxa ukufuma. Emva kune, lo intlaka anokusinika ukushukumiseka kwanda ngexesha lenkqubo, kwaye mveliso isakhiwo ntlanzi, umphezulu shrinkage. Ukuba resin kudandalaza emoyeni ngeyure ngaphezu kwesinye, kufuneka kwakhona koma phambi kokusebenzisa, ngenye indlela, le intlaka ingasetyenziswa ngqo. Amathuba ukufunxa ukufuma ayikwazi ngaphandle, ukuba intlaka kudandalaza emoyeni ngamanzi eliphezulu.
Xa-womise kwakhona i resin, umoya un-dehumidified ezitshisayo esalelweyo, kuba ngaphandle dehumidifier, hayi kuphela isiphumo yokomisa awukho, kodwa isantya absorbance wamanzi Pla intlaka nga kukhawuleziswa. Umoya dehumidified kungaqinisekisa isiphumo omiswe of Pla intlaka in desiccator. Xa usebenzisa eziko jikelele, izixhobo dehumidification kufuneka zisetyenziswe ukuba dehumidify umoya kwi oven.SD-H uthotho yobusi-amavili-uhlobo dehumidifiers ezinikwa yi Shini Pla stics Technologies Inc. luyacetyiswa ngamandla ngenxa Pla omiswe, ezinye Equipments kunye efanayo ukusebenza dehumidified nayo olukhethiweyo.
iimeko okusula kamabonwakude ziboniswe kule theyibhile ingezantsi:
omiswe Ipharamitha Izicwangciso gumbini
Residence Time (iiyure) 2-3
Ubushushu Air (℃) 80 (Ubushushu lwe oveni oqhelekileyo)
Air Dew Point (℃) -40 (Ubushushu of dehumidifier)
Air Flow Rate (m3 / hr-kg nentlaka) > 1,85
Vala xaka kwi ezantsi bese wolitshayela umphanda xa iyavala umatshini ixesha elifutshane (ngaphakathi imiz 30), uphambuke ezintethweni uvimba womqala feed. Vula xaka kwalusa intlaka emva eqinisekisa ukuba ukuphinda-ukuqala inaliti.
Ukuba umbala ukutshintsha kunye ukubola kwenzeka ngexesha lenkqubo ukulolonga, wolitshayela umphanda nangoko ukuba bagcine imeko eziphathekayo. Qhubeka isebenza ukuba izinto eziqhelekileyo, okanye ulungise parameters.
unyango lokubuyisa izinto ahlaziyekayo:
Iimveliso unqualified ekuveliseni inkqubo yemveliso revode105 nga kuqwalaselwa yaye alungiswa kunye materials.The umlinganiselo omtsha zokudibanisa akufunekile ukuba zibe nkulu kakhulu, kungenjalo imveliso iya kuba krobo kakhulu.
Izinto isetyenziswe inganyangwa ngezi ndlela zimbini zilandelayo:
Xa inkqubo yemveliso, oko comminuted ngqo kwaye zidluliselwa hopper ngokusebenzisa izinto ezintsha oluzenzekelayo feeding.The na ezinomsebenzi oxutyiweyo, kodwa ke kufuneka ukuba kuqinisekiswe ukuba amaqondo obushushu emele Iqondo lobushushu lihle laya hayi ngaphezulu kwe-60, kungenjalo kusenokubakho izinto encangathi ( indlela okunikezelwe yokusebenzisa)
Next: 60gsm White okwakhiwa Paper Roll For Paper Ngeendiza
Anti ngomgunyathi yehologram Umsonto
oluzenzekelayo wokuvungula Machine Ukupakisha
Baby Indlebe Ukucoca
Bar na isincedisi
ezinokuboliswa ziintsholongwane Plastic Raw Material
Blister ukutywina Machine Ukupakisha
C1s Indawo nqanawa
ezihlafunwayo Gum Packaging
Buds Cotton Indlebe
Cotton Iintonga olwenziwe
Indlebe Ukucoca Stick Cotton uBud
Pheleleyo Packaging Machine oluzenzekelayo
okwakhiwa wesampula iBhodi
Ilettuce Ukupakisha Machine
ebusweni Cotton Buds
Natural Umbala / Buff
Pillow Ukupakisha Machine Price
Pla intlaka For Inaliti Grade
Pla intlaka In kobulembu High
Plastic Stick Cotton olwenziwe
Polypropylene Ilaphu okungangenwa
Kk olukiweyo Ilaphu
okrwada Wood Intlama Ikhadibodi Grey
wokuvungula Single Machine Ukupakisha
yintlantsi Ixhuma Packaging Machine
White okwakhiwa Pape
Ihowuliseyili Elungiselelweyo Printing
Wooden Plastic Stick Cotton olwenziwe
701,-8 UKWAKHIWA, BOJINWAN BEIYUAN, TAIERZHUANG ROAD, Tianjin, China